FAQs - NINGBO BOLT MACHINERY EHEMA NEMAHARA & TECHNOLOGY CO., Ltd
Isu tine waranti yemidziyo yedu uye basa rekugadzira. Kuzvipira kwedu ndeye kugutsikana kwako nezvigadzirwa zvedu. Mune waranti kana kuti kwete, ndiyo tsika yekambani yedu kugadzirisa uye kugadzirisa zvese zvevatengi kugutsikana
Ehe, isu tinogara tichishandisa yakakwira mhando yekutengesa kunze. Isu tinoshandisa zvakare hunyanzvi hwekutakura hutsi kurongedza zvinhu zvine njodzi uye zvinotenderwa zvinotonhora chengetedza vatakuri vezvinhu zvinodziya tembiricha. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairika zvongedzo zvinodikanwa zvinogona kuunza imwe mubhadharo.
Mari yekutumira inoenderana nenzira yaunosarudza kuwana zvinhu. Express kazhinji ndiyo inokurumidza kupfuura asi zvakare inodhura nzira. Negungwa yegungwa ndiyo mhinduro yakanyanya kuwanda. Izvo chaizvo zviyero zvemitero isu tinongogona kukupa iwe kana isu tichiziva ruzivo rwehuwandu, uremu nenzira Ndokumbira kuti utibate kuitira rumwe ruzivo.